May 8, 2019 – KhabarChakra
चीन सरकारले हस्तान्तरण गरेको ४-५ महिना मै कोटेश्वर–कलङ्की सडकको पिच भत्कियो, मर्मतको काम शुरु
काठमाडौँ, २५ वैशाख । कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा बालकुमारी, ग्वार्खो,महालक्ष्मीस्थान लगायतका स्थानमा मर्मतको काम शुरु भएको छ । गत पुसमा चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि यहाँको सडकमा मर्मत शुरु भएको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाले जनाएको छ । मर्मत अवधि एक वर्षको हुने योजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनीयर निरञ्जन शर्मा अर्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यी तीन स्थानमा कालोपत्र पग्लने, उप्कनेलगायतका समस्या देखिएकाले[Read More…]
by KhabarC —	May 8, 2019 —	0 comments —	गृहपुष्ठ
कुन ब्लड ग्रुपका मानिसहरुलाई धेरै लामखुट्टेले टोक्छ ?
काठमाडौँ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार ‘ओ’ ब्लड ग्रुप भएका व्यक्तिहरुको रगत मच्छरले धेरै खाने गर्छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार अरु ब्लड ग्रुपका व्यक्ति भन्दा ‘ओ’ ब्लड ग्रुप भएका व्यक्तिहरुलाई मच्छरले टोक्नुमा त्यसमा पाइने तरल पदार्थ नै हो । ‘ओ’ ब्लड ग्रुपमा अरु ब्लड ग्रुपका मानिसहरुको ब्लडमा पाइने भन्दा विशेष किसिमको तरल पदार्थ हुने गर्छ । जसलाई मच्छरले मन पराउने गर्छन् । त्यसै[Read More…]
by KhabarC —	May 8, 2019 —	0 comments —	गृहपुष्ठ, स्वास्थ्य
समुद्रमा खसेको एक युवतीको आइफोन ह्वेलले फिर्ता दिएपछि विश्व चकित !
एजेन्सी, २५ बैशाख । समुद्रामा पाइने खतरनाक जीवमध्य ह्वेललाई पनि मानिन्छ तर त्यहीं ह्वेलले एक युवतीलाई भने अतुलनीय सहयोग गरेको छ । गत सोमबार नर्वेस्थित ह्यामरफेस्ट हार्बरमा साथीसँग डुङ्गामा घुम्ने क्रममा इशा ओप्दाहल नाम गरेकी युवतीले आफ्नो आइफोन समुन्द्रमा खसाएकी थिइन् । जसलाई बेलुगु प्रजातिको ह्वेलले फिर्ता गरेको हो । दुर्घटनावश् समुन्द्रमा खसेको आइफोन मोबाइल ह्वेलले त्यसकी मालिकलाई फिर्ता दिएपछि[Read More…]
प्राध्यापकलाई कालोमोसो लगाएपछि विश्वविद्यालय एक महीनादेखि ठप्प
चितवन, २५ वैशाख । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको रामपुरमा एक महीनादेखि पठनपाठन ठप्प भएको छ । गत चैत २१ गते विश्वविद्यालयको कृषि सङ्कायका सहायक डिन विष्णु ओझालाई विद्यार्थीले कालोमोसो दली अभद्र व्यवहार गरेपछि विश्वविद्यालय ठप्प भएको हो । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार मनराज कोलाक्षपतिका अनुसार ओझालाई कालोमोसो दल्ने विद्यार्थीलाई कडा कारवाहीको माग गर्दै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले आन्दोलन जारी राखेको छ ।[Read More…]
बालविवाह न्यूनीकरण तथा बालश्रम अन्त्य गर्न दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले थालेको अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री नगर निर्माणका लागि अभियानको थालनीपछि बालविवाह तथा बालश्रममा न्यूनीकरण आएको पाइएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख माया आचार्य, महिला तथा बालबालिका शाखा संयोजक नवराज लामिछाने, महिला शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठलगायतको टोलीले अनुगमन गर्दा यस्तो भेटिएको हो । तुलसीपुरको सबैभन्दा बढी बालश्रमिक[Read More…]
भरतपुर, २५ वैशाख। विनाशकारी भूकम्पले भत्किएका देवघाटका १६ कुटीको पुनःनिर्माण गरिएको छ । ५२ कुटीमध्ये १६ कुटी पुनःनिर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको हो । भवनको मङ्गलबार राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले गलेश्वर आश्रमका पीठाधीश १००८ स्वामी आत्मानन्द गिरीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । निर्धारित समयभन्दा केही दिन अगाडि नै कुटी निर्माण सम्पन्न गरिएको हो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला[Read More…]
बीसौँ राष्ट्रिय पुरुष खुला कराँते वैशाख २७ देखि
काठमाडौँ, २५ वैशाख । बीसौँ राष्ट्रिय पुरुष खुला तथा १३ औँ राष्ट्रिय महिला तौल समूह फुलकन्टयाक्ट कराँते प्रतियोगिता यही वैशाख २७ र २८ गते हुने भएको छ । नेपाल क्योकुसिन कराँते डो सङ्घको आयोजनामा हुने दुई दिने प्रतियोगिता त्रिपुरेश्वरस्थित मिनी कभर्ड हलमा सञ्चालन गर्ने प्रतियोगिता आयोजक समितिका संयोजक पुष्प मानन्धरले जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगितामा सातवटै प्रदेशबाट गरी पुरुषतर्फ ८५ र[Read More…]
by KhabarC —	May 8, 2019 —	0 comments —	खेलकद
निगमको व्यावसायिक योजना असफल !
काठमाडौं – वार्षिक ८ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्ने नेपाल वायु सेवा निगमको व्यावसायिक योजना असफल भएको छ। निगमको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै पुराना योजनालाई निरन्तरता नदिँदा र नयाँ योजना अगाडि बढाउन नसक्दा निगम धरासयी बन्दै गएको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा दीपेन्द्र थापाले लेखेका छन् । वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न नसकेर निगमको दायित्व २ अर्ब[Read More…]
by KhabarC —	May 8, 2019 —	0 comments —	पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौंमा हैजाको जीवाणु फेला
काठमाडौं – दूषित पानी सेवन गर्दा हुने हैजाका बिरामी राजधानीमा फेला परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका-१३ का एक बिरामीको दिसा परीक्षण गर्दा हैजाका जीवाणु फेला परेको हो । ४५ वर्षीय ती बिरामीको दिसामा हैजाका जीवाणु फेला परेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले बताए । झाडापखाला भएपछि उनी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपचारका लागि[Read More…]
सरकारले भारतको कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग रेल खरिद प्रक्रिया अघि बढायो
काठमाडौँ – सरकारले भारतको कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग रेल खरिद प्रक्रिया अघि बढएको छ । जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्न नयाँ रेल खरिद प्रक्रियाको स्वीकृति प्राप्त भउको करिब दुई महिनापछि रेल विभागले सम्झौता गर्न लागको हो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा निर्दोष घोरासाइनेले लेखेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले चैतमा कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुईवटा रेल खरिद गर्न[Read More…]